KBZ Business Internet Banking ဆိုတာ ဘာလဲ
Business Internet Banking ဆိုသည်မှာ အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများသာမက နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးများအထိပါ အသုံးပြုနိုင်သော Online Banking ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ မိမိ laptop (သို့) phone ကတစ်ဆင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိရှိနိုင်ပြီး ၂၄ နာရီအချိန်မရွေး ငွေကြေးများကို ပိုမိုအဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါသည်။
KBZ Bulk Payment ကို အသုံးပြုပြီး မိမိရဲ့supplier (သို့မဟုတ်) ဝန်ထမ်းများရဲ့ KBZ Bank account (သို့မဟုတ်) KBZPay မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်ထဲသို့ တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့ တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ကမ္ဘောဇဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောကုမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ့အစည်း များ စုစုပေါင်း ၅၀၀ ကျော်သို့ လစဉ်ငွေပေးချေမှုများကို KBZ Internet Banking ၏ QuickPay ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပြီး အချိန်မရွေး လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။
KBZ iBanking Tax Payment ကိုအသုံးပြုပြီး ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမှကောက်ခံသော အခွန်များအား အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ ပေးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
ဘီလ်ပေးဆောင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ KBZ iBanking မှတစ်ဆင့် မီတာဘီလ်စသည့် လစဉ်ပေးဆောင်ရန်ရှိသောဘီလ်များကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ပေးဆောင်နိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ငွေလွှဲခြင်း Own Account Transfer သည် Corporate customer များ ငွေလွှဲခအခမဲ့ဖြင့် အကောင့်တစ်ခုမှအခြားတစ်ခုသို့ လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ငွေလွှဲပြောင်းစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
KBZ ဘဏ်အကောင့်အချင်းချင်းငွေလွှဲခြင်း Fast Transfer နှင့် Transfer Other ကိုအသုံးပြုပြီး အခြား KBZ ဘဏ်အကောင့်သို့ငွေလွှဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းဘဏ်အချင်းချင်းငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု ဆိုသည်မှာငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘောဇဘဏ်အကောင့်မှ အခြားဘဏ်အကောင့်များသို့ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။
Customer များသည် ဘဏ်တစ်ခုမှအခြားဘဏ်သို့လွှဲပြောင်းရာတွင် အခြားဘဏ်သို့သွားရောက်စရာမလိုဘဲ ငွေလွှဲနိုင်ခြင်း။
Customer များသည် အခြားဘဏ်သို့ငွေလွှဲရာတွင် ငွေများကိုအခြားဘဏ်သို့ သယ်ဆောင်ရခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။
ဘဏ်အစုံအလင်မရှိသော ဒေသများသို့ငွေလွှဲရာတွင်အဆင်ပြေ စေခြင်း။
Customer များ အချိန်ကုန်ဆုံးခြင်းမှကာကွယ်ပေးခြင်း။
Real-time transfer ဖြစ်ခြင်း။
Mobile banking (သို့) Internet banking မှ ပြည်တွင်းဘဏ်အချင်းချင်း ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမည်ဆိုပါက လိုအပ်သောအချက်အလက်များ
သင့်ဘဏ်အကောင့် ငွေစာရင်းနှင့် လုပ်ဆောင်မှုမှတ်တမ်းများကို အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
Maker, Checker များ သတ်မှတ်နိုင်သောကြောင့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း
မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ software and hardware တိုကင်များနှင့် စမတ်ကျကျ၊ လုံခြုံမှုရှိရှိ log in ၀င်ရောက်နိုင်ခြင်း။
Online banking transaction များ ပြုလုပ်ရာတွင် လိုအပ်သော လုံခြုံရေးကုတ်နံပါတ်များကို ထုတ်ပေးနိုင်သည့် RSA software token ကို သင့်mobile အတွင်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
RSA hardware token device ကို ရွေးချယ်ပြီး ကုမ္ပဏီရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာ အရေးကြီးအချက်အလက်များကို မိမိလက်ဝယ်ကိုင်ထားရသလို လုံခြုံစိတ်ချစွာခံစားရစေနိုင်ခြင်း။
Business iBanking အကောင့်ကို ဘယ်လိုလျှောက်ထားနိုင်သလဲ?
နီးစပ်ရာ ဘဏ်ခွဲများသို့ သွားရောက်၍ Business iBanking အကောင့်အား လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
Business iBanking လျှောက်လွှာ
Maker, checker များ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
Maker, checker များ၏ အီးမေးလ် နှင့် ဖုန်းနံပါတ်
RSA ဝယ်ယူရန်အတွက် QuickPay ဖြင့် ပေးသွင်းထားသော Pay slip
Other Bank Transfer Rates change according to beneficiary banks and branches Up to MMK 1,000,000 MMK 1,000,000
ခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာ အပြင်သွားစရာမလိုဘဲ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ဘဏ္ဍာရေးကို လွယ်ကူလုံခြုံလျင်မြန်စွာနဲ့ စီမံခန့်ခွဲနိုင်လို့ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ KBZ iBanking ရဲ့ Bulk payment နဲ့ငွေပေးချေတာတွေ အပြင် Bill Payment နဲ့ ဘေလ်ဆောင်တာတွေကိုလည်းအချိန်မကုန် လူမပင်ပန်းဘဲလုပ်နိုင်လို့ တခြားအလုပ်တွေမှာ ပိုအာရုံစိုက်နိုင်တဲ့အတွက် တကယ်သဘောကျပါတယ်။
KBZ iBanking မှာ Other Bank Transfer၊ Transfer Other၊ Fast Transfer စတဲ့ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု features တွေစုံစုံလင်လင်ပါလို့ သုံးရတာလွယ်ကူအဆင်ပြေစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် KBZ Online Banking ကြောင့် ကျွန်မတို့ OSC ဆေးရုံရဲ့ ငွေလွှဲ transactions တွေနဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အဆင်ပြေစွာလုပ်ဆောင်နိုင်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ KBZ Digital Banking products တွေက တကယ်ကို စိတ်ကျေနပ်မှုရှိစေတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Myan Shwe Pyi Tractors မှာ KBZ Online Banking ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုသုံးဖြစ်ပါတယ်။ KBZ iBanking ရဲ့ features တွေက သုံးရတာအဆင်ပြေတဲ့အပြင် နေ့စဉ်ငွေလွှဲလုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက်လည်း လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ KBZ Bank ကနေ ပိုမိုဆန်းသစ်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ product တွေကိုထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
KBZ iBanking ရဲ့ transfer features တွေက ဘဏ်သွားစရာမလိုဘဲ ကိုယ့်ရုံးခန်းထဲကနေ အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တာဆိုတော့ အချိန်မကုန်ဘဲ အလုပ်မြန်မြန်ပြီးစေပါတယ်။ QuickPay နဲ့ Bill Payment ကနေလည်း ငွေပေးချေတာတွေ ဘေလ်ဆောင်တာတွေကို လုပ်နိုင်တာမို့လို့ အလုပ်မပိုဘဲ အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းသက်သာစေပါတယ်။ စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ငွေကြေးကို အလွယ်တကူစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ KBZ iBanking ကို အသုံးပြုကြဖို. တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
အလုပ်မှာ ငွေအမြဲလွှဲနေရတာ အရင်ကဆို ဘဏ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားပြီးလွှဲရတယ်၊ ဘဏ်မှာလူများနေရင်လည်း စောင့်ရတယ်။ ခုတော့ KBZ iBanking က Other Bank Transfer , Own Account Transfer နဲ့ တခြားငွေပေးချေမှုတွေကိုလဲ KBZ ibanking ရဲ့ QuickPay နဲ့ Bill Payment တွေကတဆင့် အိမ်မှာ၊ ရုံးမှာပဲနေပြီး ဘယ်ဘဏ်မှသွားစရာမလိုဘဲ ငွေလွှဲနိုင်လို့ အလုပ်မှာနှောင့်နှေးတာတွေလည်းမရှိဘဲ တကယ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ Company တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အလွယ်တကူငွေလွှဲနိုင်တာကြောင့် ငွေဝင်တာကိုစောင့်ရတဲ့ဒုက္ခကနေလည်းကင်းဝေးစေပါတယ်။ Business iBanking က features တွေက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ရော customer တွေပါအဆင်ပြေစေတာမို့ တကယ်ကိုသုံးကြည့်သင့်တဲ့ digital banking ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ။